बुढेसकालमा यौन सन्तुष्टि लिने यस्तो छ तरिका ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
बुढेसकालमा यौन सन्तुष्टि लिने यस्तो छ तरिका !
डा.शिखाकिरण सिंह , उमेर ढल्किँदै गएपछि पुरुषहरूलाई प्रोस्टेटको समस्याले दुःख दिन्छ । प्रोस्टेट ग्रन्थि, मुत्र थैलीको मुनि हुन्छ र यसले पिसाब बग्ने नलीलाई छोपेर राखेको हुन्छ ।
प्रोस्टेटमा समस्या देखियो भने सुरुमा पिसाब फेर्दा असजिलो हुँदै जान्छ । जस्तोः पिसाब फेर्न सुरु गर्न गाह्रो हुनु, एकचोटि पिसाब सुरु भए पछि रोक्न गाह्रो हुनु आदि ।
उमरेसँगै प्रोस्टेट पनि ठूलो हुँदै जान्छ । प्रोस्टेट ठूलो हुन नदिन र पिसाब गर्दा समस्या नहोस् भनी औषधिद्वारा उपचार सुरु गरिन्छ ।
यदि औषधिबाट निको भएन भने अपरेसन गर्नु नै जाती हुन्छ । अपरेसन गर्नको लागि तीनचारवटा विकल्प छन् । तपाईँको प्रोस्टेटको अवस्थाअनुसार जाँच गरेर निधो गरिन्छ । त्यसको लागि यहाँले युरोलोजिस्टसँग छलफल गर्नुपर्छ ।
तपाईँलाई भएको प्रोस्टेटको उपचार गर्नैपर्छ । त्यसका लागि आफ्नो युरोलोजिस्टसँग भेटेर समस्याको निदान गर्नुहोला । उहाँले नै प्रोस्टेटको अवस्था हेरेर तीनचार विकल्पमध्ये उपयुक्त अपरेसन गर्नुहुनेछ । जस्तै, टियुआरपी । प्रोस्टेटसम्बन्धी उपचार गरेपछि ७०­८० प्रतिशतमा यौन समस्या आउँछ ।
जस्तै, इरेक्सन राम्रो न हुने, रेट्रोग्रेड इजाकुलेसन हुने, चरमसुखमा फरक हुने आदि समस्या देखिन्छन् । यी समस्याको प्रोस्टेटको उपचारपछिमात्र लक्षण हेरी उपचार गरिन्छ । त्यसकारणले प्रोस्टेटसम्बन्धी अपरेसनपछि यौनसम्बन्धी समस्या हुनसक्छ । त्यसका लागि प्रोस्टेटको उपचारपछि मात्र यौन समस्याको उपचार गर्नुपर्छ ।
अहिले मेरो सेक्स गर्ने शक्ति पनि घटेको छ । सेक्स गरेपछि वीर्य स्खलन नभई फर्केजस्तो हुन्छ । अपरेसन गरैंभने मेरो सेक्स पावरमा कुनै गडबडी हुन्छ कि भन्ने डर छ मलाई । मैले कस्तो खालको अपरेसन गर्नु ठीक हुन्छ ? मलाई मार्गदर्शन गर्नुहोला ।
जस्तोः पिसाब फेर्न सुरु गर्न गाह्रो हुनु, एकचोटि पिसाब सुरु भए पछि रोक्न गाह्रो हुनु आदि । उमरेसँगै प्रोस्टेट पनि ठूलो हुँदै जान्छ । प्रोस्टेट ठूलो हुन नदिन र पिसाब गर्दा समस्या नहोस् भनी औषधिद्वारा उपचार सुरु गरिन्छ ।